OndaTablet v971 ကို Stock Firmware 4.0.3 ပြန်တင်မယ်
delete :: အခြား Android ဖုန်းများစုစည်းရာ :: အခြား Android ဖုန်းများ Offical Firmware နှင့် Custom Rom များစုစည်းမူ
by အောင်မင်းဟန် on Wed Mar 20, 2013 6:00 pm
ကလိကလိလွန်ရင်းးး Firmware ဟန်းးးစက်ရုပ်လေးကမတက် …ပြီးတော့အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့်ပြန်တင်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပါ….
အရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ Firmware zip လေးတွေကိုဒေါင်းလိုက်…ပါ
Onda v971 stock Firmware ယူရန် [You must be registered and logged in to see this link.]
..ပြီးရင်…. Device manager ခေါ်ပါ…[My Computer ကို Right click>manage နှိပ်ပြီးပဲခေါ် Wimndows+R နဲ့ ပဲခေါ်ခေါ်အဆင်ပြေသလိုခေါ်ပါ..] Device manager>Universal Serial Bus Controllers ကိုသွားပါ။ USB Root Hub တိုင်းကို Right Click နှိပ်>>roperties>>ower Management >>Allow this computer to turn of this device to save power မှာအမှတ်လေးကိုဖြုတ်ပေးပါ…
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ဖိုင်ကို Desktop ပေါ်မှာ Floder တခုဆောက်ပြီးဖြည်ထားလိုက်ပါ….. အောက်ကပုံထဲကအတိုင်း ရပါမယ်….USB-Burning-tool-SPI Floder ထဲဝင်လိုက်ပါ…
ImageBurnTool.exe လေးကို Run ပေးလိုက်ပါ…Tool ကတရုတ်စာနဲ့တက်တာဆိုတော့တရုတ် language နဲ့ပဲပြပေးသွားပါမယ်…. Language ချိန်းချင်ရင်တော့အောက်ကပုံလေးအတိုင်း.. English လိုချိန်းလို့ရပါတယ်…..
ပုံ ၁ အတိုင်းဆက်လုပ်ပြီးးး Resource…v971D_v 1.5.5.zip လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါ..ပုံ ၂ အတိုင်းရသွားပါမယ်….
Tablet ကိုပါဝါပိတ်လိုက်ပါ….Home Button နှိပ်ပြီးးး USB ထိုးလိုက်ပါ….ပြီးမှ Power နှိပ်လိုက်ပါ….လေးစက္ကန့်လောက်ပါ…ကွန်ပြူတာမှာ Driver တောင်းပါလိမ့်မယ်…. USB-Burning-tool-SPI>> AmlogicusbBurningdriver>>ကိုညွန်းပေးပြီး Driver သွင်းပေးလိုက်ပါ..[ windows ပေါ်မူတည်၍ရွေးပါ….] Driver သွင်းပြီးလို့ ကွန်နဲ့ဖုန်းသိသွားပြီဆိုရင် ပုံ ၃ အတိုင်း ပေါ်နေပါမယ်..
အဲတာဆိုဝိုင်းပြထားတဲ့ခလုတ် [Start (开始) ] လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ…..Firmware တင်နေပါပြီ…အောက်ကပုံအတိုင်းအပြာတန်းလေးပြည့်ပြီဆိုရင်ရသွားပါပြီ….. Power ဖွင့်လိုက်..ပါ…
ကဲ Power ပြန်တက်လာပြီးးအကောင်းအတိုင်းပြန်ရပါပြီ….အကယ်၍တင်နေရင်းးး Fail ပဲပြပြနေရင်တော့ Start ခလုတ်အောက်က Stop ခလုတ်လေးနှိပ်ပါ….USB ကြိုးဖြုတ် Run ထားတဲ့ Burning tool ကိုပိတ်…USB ပေါက်ပြောင်းထိုးပြီးအစကပြန်စပါ…..ဇွဲမလျှော့ပါနဲ့… ဘာမှမတတ်တဲ့ကျနော်တောင်ဇွဲမလျှော့ပဲလုပ်တာ ၁ နာရီလောက်အကြာမှာ…. အဆင်ပြေသွားပါတယ်…. ကိုယ်တိုင် စမ်းထားပီးသားနော်
လုပ်ကြည့်ပါ…ကြိုးစားကြည့်ပါ..အဆင်မပြေရင်ကျနော်ကိုသံချောင်းခေါက်လိုက်..ပါ… ကူဖျတ်ပေးပါမယ်… ပြန်မရေးချင်လို့ပြန်ကူးးးလာတာ....
credit to>>Oo JojOe
ဖိုရမ်ထဲစရောက်တဲ့နေ့ : 2013-03-20
နေရပ်လိပ်စာ : Yangon
Jump to: Selectaforum||--Android နှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများစုစည်းရာ| |--Android နှင့်ပတ်သက်သော Tool Kit များစုစည်းမူ| |--Android အတွက် Game နှင့် App များ| |--Android Cracking App & Game စုစည်းမူ| |--Android အထွေအထွေလေ့ကျင့်ခန်း| |--Huawei ဖုန်းများစုစည်းရာ| |--Huawei Offical Firmware များ နှင့် Custom Rom များစုစည်းမူ| |--Huawei ဖုန်းများ Root လုပ်နည်းစုစည်းမူ| |--Samsung ဖုန်းများစုစည်းရာ| |--Samsung ဖုန်းများ Offical Firmware များနှင့် Custom Rom များစုစည်းမူ| |--Samsung ဖုန်းများ Root လုပ်နည်းနှင့်အထွေထွေစုစည်းမူ| |--Sony ဖုန်းများစုစည်းရာ| |--Sony Offical Firwmare များ နှင့် Custom Firmware များစုစည်းမူ| |--Sony ဖုန်းများ Root လုပ်နည်းနှင့်အထွေအထွေစုစည်းမူ| |--HTC ဖုန်းများစုစည်းရာ| |--HTC ဖုန်းများ Offical Firmware နှင့် Custom Rom များစုစည်းမူ| |--HTC ဖုန်းများ Root လုပ်နည်းနှင့်အထွေအထွေစုစည်းမူ| |--Lenovo ဖုန်းများစုစည်းရာ| |--Lenovo ဖုန်းများ Offical Firmware နှင့် Custom Rom များ| |--Lenovo ဖုန်းများ Root လုပ်နည်းနှင့်အထွေထွေစုစည်းမူ| |--LG ဖုန်းများစုစည်းရာ| |--LG ဖုန်းများ Offical Firmware နှင့် Custom Rom များ| |--LG ဖုန်းများ Root လုပ်နည်းနှင့်အထွေထွေစုစည်းမူ| |--အခြား Android ဖုန်းများစုစည်းရာ| |--အခြား Android ဖုန်းများ Root လုပ်နည်းများ| |--အခြား Android ဖုန်းများ Offical Firmware နှင့် Custom Rom များစုစည်းမူ| |--iOS အတွက်စုစည်းရာ |--iOS အတွက် Game နှင့် App များ |--Cydia Tweaks များ |--iOS Firmware များ |--JailBreak လုပ်နည်းများ |--Network Lock ဖြည်နည်းများ |--အထွေအထွေလေ့ကျင်ခန်းများ |--iOS Cracking App & Game စုစည်းမူ